Sida loogu wareejiyo WhatsApp-ka SD: isticmaal xusuusta dibedda oo ha u isticmaalin ta mobiilkaaga | Wararka Gadget
Qolka Ignatius | | Mobiles, Tababarada
Codsiyada farriinta ayaa halkaan ku sii jiraya maantana waxay noqdeen aaladda ay adeegsadayaasha adeegsadaan labadaba dirista iyo farriimaha wac ama wicitaan fiidiyoow ah, ugu yaraan ka mid ah codsiyada bixiya shaqadan, sida ku dhacday barxadda boqoradda adduunka ee taleefanka: WhatsApp.
Waxay kuxirantahay aaladda aan isticmaalno waxayna kuxirantahay qaabeynta aan dhidibada u aas aasey, taleefankeena casriga ah ayaa si dhaqso leh u buuxin kara, qaasatan hadii aan kamid nahay kooxo badan, kooxo fiidiyowyada iyo sawirada guud ahaan lagu wadaago tiro badan Haddii xusuusta qalabkeenna ay buuxdo, waa nalagu qasbay u wareeji WhatsApp-ka SD.
Laakiin qalabka oo dhan ma laha dhibaatadan oo kale, tan iyo Apple iPhone-ku ma laha ikhtiyaar ay ku ballaariyaan booska keydinta gudahaSidaa darteed, sida kaliya ee looga soo saari karo waxyaabaha ay ku jirto WhatsApp waa iyada oo laga tirtiro qalabka ama laga soo saaro iyadoo la isku xirayo iPhone-ka kombiyuutarka iTunes.
Si kastaba ha noqotee, gawaarida Android wax dhibaato ah kuma qabaan markay tahay ballaarinta booska lagu keydiyo, Maaddaama dhammaan boosteejooyinka ay noo oggolaanayaan inaan ku ballaarinno kaarka microSD, kaas oo noo oggolaanaya inaan u rarno nooc kasta oo codsi ah ama waxyaabaha ku jira kaarka ah si aan u sii deyno booska gudaha ee boosteejada, booska lagama maarmaanka u ah hawlgalka saxda ah.
1 U wareeji WhatsApp kaarka SD
1.1 Iyadoo maamule feyl ah
1.2 Iyadoo kumbuyuutar ah
2 Tilmaamo si loo keydiyo booska WhatsApp
2.1 Hubi dejinta WhatsApp
2.3 Si joogto ah dib ugu eeg galabta sawirada
2.4 Xakamee tirada kooxaha aan ka mid nahay
U wareeji WhatsApp kaarka SD
Markaad ku rakibayso barnaamijyada 'Android', waxaa lagu rakibay nidaamka dhexdiisa, iyadoo laga gaari karo meelaha ugu xiisaha badan, sidaa darteed waligeen ma awoodi doonno inaan galno faylasha dalabka, illaa aan haysanno aqoonta lagama maarmaanka ah mooyee. Habka hooyo, markasta oo aan ku rakibno WhatsApp bartayada 'Android', galka loo yaqaan 'WhatsApp' ayaa laga abuuray buuga gundhigga geynkeena, galka ay ku kaydsan yihiin dhammaan waxyaabaha ka soo baxay terminal-ka.
Muddo dhowr sano ah, Android waxay noo oggolaatay inaan barnaamijyada qaarkood ugu wareejino kaarka SD, sidaa darteed meesha bannaan ee lagama maarmaanka u ah inay shaqeyso waa tan kaarka xusuusta. Nasiib darrose, in yar baa codsiyada ah noo oggolow inaan xogta u wareejino kaarka SD, WhatsAppna ma ahan mid iyaga ka mid ah, sidaa darteed waxaan ku qasbanaan doonnaa inaan u adeegsanno habab kale oo gacan ah.
Iyadoo maamule feyl ah
Dhaqaaq galka oo dhan oo la magacaabay WhatsApp ilaa kaadhka xusuusta waa nidaam aad u fudud oo u baahan aqoon yar ka isticmaalaha. Kaliya waxaad ubaahantahay maamule faylka, tag galka xididka ee terminalkeena, xulo galka WhatsApp oo jar.
Marka xigta, mar labaad anagoo isticmaaleyna maareeyaha feylka, waxaan aadeynaa galka asalka ee kaarka xusuusta oo ku dhaji galka. Nidaamkan qaadan kartaa waqti dheer, waxay kuxirantahay booska uu buugan hada kujiro qalabkeena. Waxay sidoo kale ku xirnaan doontaa xawaaraha kaarka microSD ee aan isticmaaleyno.
Marka hawshu dhammaato, dhammaan waxyaabaha aan ku kaydinay galka WhatsApp waxaa laga heli karaa kaarka xusuusta, taas oo noo ogolaaneysa inaan lacag badan ka baneyno kumbuyuutarkeena. Markii aan dib u fureyno barnaamijka WhatsApp, galka la yiraahdo WhatsApp ayaa mar kale lagu abuuri doonaa galka xididka qalabkeena, maadaama aan kaliya dhaqaajinay xogta keydsan ee dalabka, ee aan ahayn dalabka laftiisa.
Tani nagu qasbi inaan howshan u qabanno si joogto ah, gaar ahaan marka terminal-ka uu bilaabo inuu si isdaba joog ah nooga digo in booska keydku ka hooseeyo caadiga. Sanadihii la soo dhaafay, shirkado badan ayaa si asaasi ah noogu yaboohay maamule feyl, sidaa darteed maahan muhiim in loo adeegsado Google Play si loogu wareejiyo WhatsApp kaarka SD.
Haddii boosteejadaada ma laha maamule feyl, mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee hadda laga heli karo Google Play Store waa ES File Explorer, oo ah maamule fayl oo noo ogolaanaya inaan ku qabanno hawlgallo faylasha qaab aad u fudud oo dhakhso leh, in kasta oo aqoonta adeegsadayaashu ay aad u kooban tahay.
Iyadoo kumbuyuutar ah
Haddii aynaan rabin inaan kala soo baxno codsi aan u adeegsanayn kombuyuutarkeenna, ama maareeyaha faylka ee lagu soo daray gundhiggeenna uu ka dhib badan yahay sida ay u muuqato, waxaan had iyo jeer dooran karnaa inaan u wareejino waxyaabaha ku jira WhatsApp kaarka SD kombuyuutar In sidaa la yeelo, waa inaan ku xirnaa taleefankeena casriga ah kombuyuutarkeena oo aan isticmaalno Bedelka Faylka Android.
Wareejinta faylka Android waa codsi Google ah wuxuu siiyaa qaabkeena gabi ahaanba waa bilaash iyo taas oo aan si fudud ugu wareejin karno waxyaabaha ka soo baxa qalabkeenna casriga ama haddii kale dhibaato la'aan iyo xawaare guud. Markaan ku xirno qalabkeena casriga, codsigu si toos ah ayuu u bilaabanayaa. Haddii aysan sidaas yeelin, waa inaan gujino astaanta si aan u socodsiino.
Codsiga waxay na tusi doontaa maamule fayl oo leh dhammaan waxyaabaha ku jira taleefannada casriga ah, waxyaabaha aan ka goyn karno oo aan ku dhejin karno labadaba kombuyuutarkeena iyo kaarka xusuusta ee terminaalkeena, kaas oo sidoo kale barnaamijku marin u leeyahay. Si aan ugu guurno waxyaabaha ku jira WhatsApp kaarka SD, waa inaan tagnaa galka WhatsApp oo leh badhanka midig ee midig guji Cut.
Marka xigta, waxaan u aadnaa kaarka SD, dalabka laftiisa iyo galka asalka ayaan midig u gujineynaa oo waxaan dooran karnaa Dhajiye. Haddii nuqulkan iyo dhajisku yara yara adag yihiin, si fudud ayaan u sameyn karnaa ka soo jiido faylka WhatsApp xusuusta gudaha qalabka ilaa kaarka SD-ka ee terminal-ka. Muddo intee le'eg howshu waxay ku xirnaan doontaa xawaaraha kaarka iyo cabbirka buugga. Qeexitaanka qalabka aan ku fulineyno howshan saameyn kuma yeelaneyso xawaaraha howsha.
Tilmaamo si loo keydiyo booska WhatsApp
Hubi dejinta WhatsApp
Kahor intaadan u dhaqaaqin u guuritaanka waxyaabaha ku jira WhatsApp, waa inaan isku daynaa inaan ka hortagno kooxdeena inay si dhakhso leh u buuxiyaan fiidiyowyo iyo sawirro markale. Si tan loo sameeyo, waa inaan tagnaa xulashooyinka qaabeynta WhatsApp iyo qaybta dhexdeeda Toos u soo degso multimedia xulo fiidiyowyada Marnaba.
Sidan oo kale, kuma awoodi doonno oo kaliya inaan ku keydin karno sicirka moobiilkeena, laakiin waxaan sidoo kale ka hortageynaa fiidiyowyada, nooca feylka ee fadhiya meesha ugu badan, waxaa si toos ah loogula soo baxaa qalabkeena inkasta oo aanaan danaynayn waxa ugu yar.
Hal ikhtiyaar oo aan ku daawan karno fiidiyowyada loo diro mid ka mid ah kooxaha aan ka tirsan nahay, gaar ahaan haddii ay aad ugu badan yihiin faylka noocan ah ee faylalka badan, ayaa ah inaad ka dhex gasho WhatsApp Web kombuyuutar. Markaad marinayso shabakadda WhatsApp, dhammaan waxyaabaha aan ka soo dejisanno kombuyuutarkayaga waa la keydin doonaa, markaa muhiim ma noqon doonto in laga soo dejisto kumbuyuutarkeena si loogu biiro fiidiyowyada kale iyo keydinta qalabkeenna si dhakhso leh ayaa loo dhimi doonaa.
Si joogto ah dib ugu eeg galabta sawirada
Labadaba macruufka iyo Android, WhatsApp waxay leedahay waali farxad leh oo aan na weydiinin haddii aan dooneyno inaan ciriirino fiidiyowyada iyo sawirada qalabkayaga, laakiin halkii ay si otomaatig ah u daryeesho, taas oo sabata taas waqti ka dib, booska kooxdayadu wuu yaraanayaa. Hawlgalkani wuxuu nagu qasbayaa inaan dib-u-eegis ku sameyno galabkeenna si aan u tirtirno dhammaan fiidiyowyada iyo sawirrada aan ka helnay dalabka farriinta ee sidoo kale laga heli karo dalabka laftiisa.
Codsiyada kale, sida Telegram, waxay noo ogolaanayaan inaan qaabeyno arjiga si dhammaan waxyaabaha aan ka helno si toos ah ha ugu kaydin gallerykeena, taas oo noo ogolaaneysa inaan ku keydinno, kaliya sawirada iyo fiidiyowyada aan runtii dooneyno. Intaas waxaa sii dheer, waxay noo ogolaaneysaa inaan si joogto ah u faaruqino dhammaan waxyaabaha ku keydsan keydka arjiga, si loo yareeyo cabbirka qalabkayaga.
Xakamee tirada kooxaha aan ka mid nahay
Kooxaha WhatsApp waa dhibaatada ugu weyn marka qalabkeenu si dhakhso leh u buuxsamo waxyaabo dheeraad ah oo aynaan codsan, markaa had iyo jeer waxaa lagugula talinayaa inaadan ka mid noqon kooxaha kooxaha loo soo diro waxyaabo badan oo badan oo ka badan farriimaha qoraalka, illaa iyo inta ay suurtagal tahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Tababarada » Sidee loogu dhaqaajiyaa WhatsApp kaarka SD
Autonomous Ready Spain, mashruuca isku xiraya Barcelona iyo gaariga madax-bannaan
Shiinaha wuxuu bilaabaa sahaminta dhinaca fog ee Dayaxa